R/wasaare ku xigeenka dalka oo si aan caadi aheyn loogu soo dhaweeyay Garoonka Aadan Cadde |
R/wasaare ku xigeenka dalka oo si aan caadi aheyn loogu soo dhaweeyay Garoonka Aadan Cadde
Zenegra buy online, acquire dapoxetine. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka soo gaaray Ra’iisul-wasaare ku xigeenka magacaaban Maxamed Cumar carte.
Ra’iisul-wasaare ku xigeenka, ayaa waxaa garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho kusoo dhabeeyay Wasiiro iyo Mudanayaal ka tirsan Golaha Baarlamaanka Dowlada federaalka ah ee Soomaaliya.
Soo dhaweyn diiran kadib R/wasaaraha dalka ayaa waxa uu Warfidiyeenada kula hadlay Hoolka nasashada ee Garoonka ayaa ugu horeyn kaga mahad celiyey guud ahaan dadkii soo dhaweeyay sida ay ugu soo dhayen magaalada Muqdisho.
Waxa uu mudanayaasha Barlamaanka Federalka Soomaaliya ugu baaqay in maalinta beri ah ay codka kalsoonid siyaan golaha wasiiradda uu soo dhisay ra’isul wasaraha dalka isagoo tilmaamay in dowlada soomaaliya ay horyalaan howlo badan oo lagu hormarinayo dalka isla markaana dadka Soomaaliyeedaay doonayaanin lala yimaado wax qaabd dhab ah.
Si kastaba ha ahaatee, imaanshaha Ra’iisul-wasaare ku xigeenka magacaaban Maxamed Cumar carte ayaa kusoo beegmeysa xili maalinta bari ah lagu wado in Wasiirada Xukuumada cusub la horgeeyo Baarlamaanka.